Moments Neshamwari 15
Iwe unogona kundiudza here chimwe chinhu pamusoro pemhando yemoto kana murazvo? Yakagara ichiita chinhu chakavanzika zvikuru. Handigoni kuwana ruzivo runogutsa kubva mumabhuku esayenzi.
Moto ndiyo mweya wemurazvo. Murazvo muviri wemoto.
Moto ndiyo inoshanda inopa simba chinhu chekufambisa mumiviri yese. Pasina moto miviri yese yaizogadzikiswa-zvisingagoneki. Moto ndewe mumuviri wega wega unomanikidza izvo zvimiro zvemuviri kuti zvichinje. Mune munhu, moto unoita nenzira dzakasiyana siyana. Chinhu chemoto chinopinda kuburikidza nemhepo uye mukati meropa. Iri kupisa marara emarara ayo anotakurwa neropa uye obviswa nenzira dzezviratidzo, sedzepores, mapapu nedumbu remukati. Moto unokonzera kuti astral, mamorekuru, fomu yemuviri kuchinja. Iyi shanduko inogara ichiburitsa kupisa mumuviri. Moto uye oksijeni, muviri wakakomba umo moto unoratidzira, unosimudzira zvishuwo, zvichikonzera kubuda kwechido nekutsamwa, unopisa muviri we astral uye unoshandisa iyo nerve simba. Chiito chakadai chemoto chiri chinhu uye zvinoenderana nekumanikidzirwa kwechisikigo.
Kune mumwezve moto, unozivikanwa kune vamwe seyakachemwa moto. Iyo yechokwadi alchemical moto ndiyo moto wepfungwa mupfungwa, inodzivisa moto wekutanga uye inodzora uye inomanikidza kuti vatevedze nehungwaru dhizaini sekutemerwa kwepfungwa; nepo, kana isingadzoreke nemunhu, iwo moto wekutanga wechido, shungu nekutsamwa, unodzorwa nepfungwa dzese, ndiko kuti, pfungwa mune zvakasikwa, dzisina munhu mumwe-anonzi Mwari, zvisikwa, kana Mwari anoita kuburikidza nechisikigo. Munhu, sepfungwa dzemunhu, achibata pane moto wekutanga uye achivamanikidza kuti vatevedze nehungwaru hwekugadzira, zvinoita kuti vapinde mumusanganiswa mutsva uye mhedzisiro yemasanganiswa emhando yekutanga moto inofungidzirwa. Kubudikidza nemafungiro uye mukufunga mirazvo yemuviri uye zvinhu zvechimiro zvinopihwa chimiro mune zvisingaonekwi zvepasirese. Aya mafomu emafungiro mune zvisingaoneki zvepasi anomanikidza zvakakomba kuti zvizvishongedze pachavo kune mafomu.
Humwe hunhu hwemoto nemurazvo ndewekuti zvinopisa, izvo hazvina kumbobvira zvaramba zvakadaro, kuti zvakasiyana nechero chiitiko chatinoziva, icho chinopa mwenje, kuti chinoburitsa utsi, kuti vanoshandura mafomu. nokuidzikisa madota, kuti kuburikidza nemurazvo, muviri wayo, moto unobva wangoerekana wanyangarika, kuti vanogara vachikwira kumusoro uye vanonongedzwa. Moto uyo watinoona ndeye iwo mamiriro iwo mweya wemuviri, wakasungwa muhusungwa nechinhu chakakomba, unosunungurwa uye unodzokera uchiri mune wawo wekutanga mamiriro. Pandiza yake, munyika mayo, moto wakasununguka uye unoshanda, asi munzira yekuratidzwa nepoiratino chiitiko chemoto chinodzikiswa ndokudzora uye pakupedzisira chakabatwa mukati memiviri yavo iwo iwo iwo mweya, nekuti moto ndiyo mumweya mumiviri yese. Moto wakabatanidzwa muhusungwa nenyaya yakakura isu tingaiti latent fire. Iyi moto wekupedzisira iri muumambo hwese hwezvisikwa. Latent moto iri, zvakadaro, inoshanda zvakanyanya mune mamwe madhipatimendi ehumwe hwehumambo pane mamwe madhipatimendi ehumambo humwe. Izvi zvinoratidzwa nefirisi nesurferi mune yemineral, nehuni hwakaomeswa uye huswa muumambo hwemuriwo uye nemafuta uye ganda mumiviri yemhuka. Moto unopisa uriwo mune mamwe mvura, akadai semafuta. Muviri unoputika unoda kuvepo chete wemoto unoshanda kuti ubudise nekusunungura iwo kubva mujeri rake. Achingobvutwa, moto wekupedzisira unobva waoneka kwechinguvana, wobva wapfuura kupinda munyika isingaoneki kwawakabva.
Moto ndicho chimwe chezvinhu zvina zvinozivikanwa kune vese mashura. Moto unonyanya kudhimoni pazvinhu zvemukati. Hakuna kana chimwe chezvinhu chinozivikanwa semoto, mweya, mvura uye pasi zvinoonekwa neziso, kunze kwemamiriro ekunze kwechinhu ichocho. Naizvozvo tinoona chete yakadzika kwazvo zvikamu kana zvinhu zvezvinhu izvo zvatinowanzo taura sevhu, mvura, mhepo nemoto. Chimwe nechimwe chezvinhu zvina chakakosha pakuvakwa kwenyama, uye chimwe nechimwe chezvinhu chinomiririrwa zvine hukama neizvozvo. Sezvo chidimbu chimwe nechimwe chechinhu chemuviri chinobata zvinhu zvina zvakasanganiswa mune zvimwe zvikamu, chimwe nechimwe chezvinhu zvina chinodzoserwa kuchimiro chazvo pachangopera chisanganiswa. Moto ndiyo inowanzo kuputsa kusanganisa uye inokonzeresa izvo zvinhu zvakapinda mumusanganiswa kuti zvidzokere kumatunhu adzo. Kana moto ukadzurwa, ichive chinhu chikuru mumiviri inoputika, zvinongoita sekunge zvichinge zvapera. Mukupfuura zvakare zvinokonzeresa izvo zvimhepo mhepo, mvura uye pasi kuti zvidzoke kune kwavo kwakati wandei. Mhepo inodzoka nemvura inoonekwa muutsi. Chikamu cheutsi icho chiri mweya, uye chinocherechedzwa kazhinji kazhinji mukuzunungusa kweutsi, munguva pfupi chinenge chisingaonekwe. Icho chikamu cheutsi icho chiri mvura inodzokera kune element mvura nemunyoro, zvakare yakamiswa mumhepo, uye inova isingaoneki. Chikamu chega chakasara chikamu cheyakaomesesa chepasi, chiri mumoto nemadota. Kunze kwemoto wepamberi pane moto wemakemikari unoratidzwa neyakaora chiitiko chemamwe makemikari anounzwa achibatana nemamwe makemikari, neiyo oksijeni inoitwa neropa, uye nemafiramu izvo zvinokonzeresa kugaya kwekudya. Ipapo kune arikemoto moto uyo unoburitswa nemafungiro. Kuita kwemoto wechemia wepfungwa kunokonzeresa chishuvo chakakomba kuti chipinidzirwe muhurongwa hwepamusoro hwechido, icho chinogoneseswazve uye kunyudzwa muzvido zvekunamata, zvese nemoto wechiridzwa wepfungwa. Uyezve kune moto wemweya uyo unodzora zviito zvese nepfungwa muzivo uye unovaka muviri wemweya usingafi, unogona kuve unofanidzirwa nemuviri wemweya muviri.
Chii chinokonzeresa kupokana kukuru, sekudziya kwemoto nemoto zvinoita kunge zvichitenderera panguva imwechete kubva kunzvimbo dzakasiyana dzeguta, uye chii chinobuda chinguva.
Pane zvakawanda zvinobatsira zvinokonzeresa kupokana, asi izvi zvikonzero zvakawanda zvinomiririrwa mune chikonzero chaicho chekupiswa, ndiko kuvapo kwechinhu chomoto moto usati waoneka. Inofanira kunzwisiswa kuti moto sechinhu chinogona kusanganisa pamwe nezvimwe zvinhu, mundege yemoto, kana pane mamwe ndege. Nekubatanidzwa kwezvinhu zvakasiyana tinowana mhedzisiro chaiyo. Kana iyo moto-chinhu chiripo musimba guru inodzora zvimwe zvinhu zviripo uye zvinomanikidza kuti vatize nekuvapo kwayo kwakanyanya. Kuvapo kwechinhu chomoto-moto kunoita kuti moto ubvise mumiviri yakavakidzana uye kuburikidza nemurazvo wemoto choto chakasungwa chinodzokera kuchinobva kwawatanga. Murazvo unoburukira unoshandiswa nemoto unoidzima kuti upinde munyika kuburikidza nemurazvo. Kana iyo moto-chinhu ichitonga nemuchadenga mune simba rakakwana rinoita pazvinhu zvese zvinoputika; ipapo nokutsamwa kukuru, sokushatirwa, nyaya iyi inopfuta. Mota dzePrairie kana dzemasango dzinogona kukonzerwa kubva pamoto wevafambi, kana nemwaranzi yezuva, uye kusagadzikana kungave kuri kukonzera kupisa kweguta, asi izvi hazvireve chikonzero chikuru nguva dzese. Mumwe anogona kunge akatoona kuti kuedza kuvaka moto mumamiriro ezvinhu akanaka kwazvo kazhinji kunoteverwa nekutadza zvachose, nepo, pakukanda chimuti chinopenya padiki padoko, kana padenga reichi chivakwa chikuru chisina chinoratidzika. iripo inogona kupisa zvirinyore, asi moto waunzwa netsvimbo inopenya uye yakapararira nekukasira zvekuti wapisa chivakwa chose pasi, zvisinei hazvo kuedza kukuru kungave kuri kuriuponesa. Makakatanwa akapedza maguta makuru anonyanya kuvepo nekuda kwekuvapo kwechinhu moto mumamiriro ese akadaro, kunyangwe zvakadaro zvimwe zvinokonzeresa zvinogona kuitika.
Kungopararira kwemoto zvinonzi ndiyo inokurumidza kubatanidza zvinhu zvinoputika neokisijeni. Asi chikonzero chacho chakanyanya kukonzerwa nekugadziriswa kwechinhu chinokanganisika chinoputika chinokwezva moto-chinhu. Nekudaro, kupopotedzana pakati pezvinhu zviviri zvinoputika, zvakaita semafuta nemarara, zvinoteverwa nekubatanidzwa kamwe kamwe kwechinhu neokisijeni mumhepo; izvi zvinokonzeresa moto-chinhu, chinotanga icho chinhu kuita murazvo.
Zvinhu zvakadai segoridhe, mhangura uye sirivha zvakagadzirwa sei?
Kune masimbi, ayo dzimwe nguva anonzi aya matsvene. Chimwe nechimwe cheizvi isimba rakasungwa uye rakasungwa, rakajeka kana hunhu hunobva pane imwe yemitumbi minomwe yechiedza iyo yatinoona muchadenga uye inodaidza mapuraneti. Simba, kana kuti mwenje, kana mhando, yeimwe yeiyi mitumbi yatinoti mapuraneti inokwezva nenyika pamwe nemwedzi wayo. Aya masimba aripo uye anonzi mweya yekutanga yezvinhu kana mapuraneti. Pasi pamwe nemwedzi waro zvinopa muviri uye chimiro kune izvo zvekutanga masimba. Masimbi anomiririra matanho manomwe kana madhigirii ayo mauto emukati anofanirwa kupfuura muumambo hwemaminerari vasati vambove nehumambo hwakasiyana uye vachipfuura muumambo hwepamusoro hwechisikwa. Pane zvakawanda zvinoshandiswa zvinogona kushandiswa izvo simbi zvinomwe. Kurapa kunogona kuitwa uye hosha dzinounzwa nekushandiswa kana kushandiswa zvisirizvo kwesimbi. Masimbi ane hupenyu hunopa uye hunhu hunouraya. Idzi dzose dzeidzi dzinogona kubviswa, nehana kana kusaziva, kana mamwe mamiriro ezvinhu akaitika. Kwaizove kunoteedzera kupa kurongeka kwekufambiswa kwesimbi uye nehumwe hunhu hwayo, kunyangwe isu taivawo nezvakawoneka, nekuti, nepo paine kurongeka kuri kurongeka kubva kuhurumende kune nyika yemasangano anoshanda achishandisa masimbi, Kurongeka uku hakuna kugona kushandiswa nevanhu vese zvakafanana. izvo zvaizoshanda kunobatsira kweumwe zvingaodza mumwe. Munhu wega wega, kunyangwe akavakwa zvinoenderana nehurongwa hwakafanana, ane mukuumbwa kwake humwe hunhu hunoenderana nemweya yekutanga yesimbi; mamwe acho anobatsira, mamwe ndeechimiro. Kazhinji kutaura, zvisinei, goridhe inomiririra chikamu chepamusoro chebudiriro pakati pesimbi. Iyo simbi nomwe zvinotaurwa nezvadzo iini, goridhe, zera, mhangura, sirire inotungamira nesimbi. Uku kukwikwidza hakufanirwe kutorwa sekuraira kwekufambira mberi, kana kudzosera kumashure.
Masimbi anonyanya kushandiswa pazera rapfuura haasi mazhinji pane izvozvi. Goridhe inotariswa nesu kuti ive yakakosha kwazvo pane ese masimbi manomwe, kunyangwe isiri iyo inonyanya kubatsira. Isu tinogona nyore nyore kugadzira negoridhe nhasi kupfuura zvatingaite nesimbi. Pamasimbi, iron ndiyo inonyanya kukosha kune budiriro yedu, sezvo ichipinda muzvikamu zvese zvehupenyu hwemaindasitiri, sekuvakwa kwezvivakwa zvakakura, mashandiro ekuvaka uye kushandiswa kwezviputi, zvezvitima, injini, maturusi . Iyo inoshandiswa zvinangwa zvekushongedza, uye inokosha uye yakakosha mumushonga. Mamwe mafambisirwo akamhanya kuburikidza nenguva dzawo dzakasiyana, dzinozivikanwa segoridhe, sirivheri yendarira (kana yendarira) uye mazera esimbi. Vanhu vepasi, kazhinji kutaura, vari mune zera resimbi. Izera rakaoma uye rinochinja nekukurumidza kupfuura chero vamwe. Zvatinoita izvozvi zvinotibata zvakanyanya zvakanaka kupfuura chero nguva ipi neipi nekuti zvinhu zvinofamba nekukasira muzera re iron kupfuura mune chero ipi. Zvikonzero zvinoteverwa nemhedzisiro yavo nekukasira kukurumidza mune yesimbi kupfuura mune chero imwe nguva. Izvo zvinokonzeresa izvo zvatinoisa izvozvi zvichapfuura zera rekutevera. Zera rekutevera izera regoridhe. MuAmerica, uko mujaho mutsva unogadzira, isu tatozvipinda mauri.
Masimbi manomwe pano akaverengerwa akaverengerwa pakati pemakumi manomwe zvinhu zvisinganzwisisiki zvakasimbiswa uye zvakanyorwa nesainzi yazvino. Nezve maumbirwo avakaita isu takataura kuti mauto, mwenje, kana hunhu hunobva mumitumbi minomwe iri muchadenga, inonzi mapuraneti, inokwezva nepasi. Pasi rinomisa kukwezva kwemagineti uye, nekuda kwemamiriro aripo, kune aya masimba anogadzirwa zvishoma nezvishoma nekugadzirwa, achigadzira tunhu pane chinhu chiri mukati memagineti bhandi rinokwevera simba. Imwe yeiyo masimba manomwe inozivikanwa nerumwe ruvara uye mhando nemafambisirwo ayo zvikamu zvarara pamwechete. Iyo nguva inotora kuumbwa kweasimbi chero ipi inotsamira pamamiriro ezvinhu, segoridhe inogona kugadzirwa munguva pfupi pfupi apo mamiriro ese ezvinhu anodiwa aripo.